Misy mahita tombontsoa amin’ny korontana | NewsMada
Par Taratra sur 19/11/2020
Fiteny mandrakariva ny hoe tsy misy mahita na mahazo na manana tombontsoa amin’ny korontana, indrindra ny hoe korontana politika. Marina ve izany? Nefa tena misy, rey olona, ny mitady sy miady tombontsoa manokana amin’ny korontana. Tsy iza tsy iza fa ireo mpilalao politika fatra-piandry kendry tohina ka manararaotra korontana politika hahazoana toerana na fahefam-panjakana.
Efa nisy teto izany ary ahina mbola mety hiverina. Tsy ilaozan’izay za-dratsy hahazo tombontsoa manokana amin’ny korontana politika. Tsy sahy miatrika fifidianana fa miandry kendry tohina amin’ny korontana politika. Amin’izany no mampirongatra ho azy ny karazana antoko na fikambanana politika maniry toy ny anana. Mba hahazoana toerana sy fahefam-panjakana amin’ny hoe fiaraha-mitantana.
Heverina ho tia tanindrazana ho azy amin’izao avokoa ny olon-drehetra? Tsy inoana izay hoe hamotika ny fiainam-bahoaka, na hampikatso ny raharaham-pirenena… Marina koa ve izany? Tena misy, rey olona, ny tsy mahalala afa-tsy ny tenany sy ny tombontsoa manokana, mpamadika tanindrazana aza. Tsianjery ihany ny hoe tsy misy mahita tombontsoa amin’ny korontana, samy tia tanindrazana avokoa…
Tsy asian-teny betsaka eto andrao manakorontana: misy ny ady tombontsoa afitsoky ny firenen-dehibe sasany, mamboly korontana mivantana na ankolaka, hanomezana vahaolana na fandaminana ho amin’izay mahamety azy. Tsy zava-baovao izany fa fahita eran-tany. Ao aza ny karazana olona na fikambanana miafina na ankarihary karamaina amin’izany. Marina ihany koa ve izany? Samy mieritreritra…
Ny tsy azo lavina, tena misy aza ny mitady korontana rehefa voatohintohina ny tombontsoany manokana. Na ahoana na ahoana, ady tombontsoa mandrakariva ny hoe politika? Arakaraka ny fifandanjan-kery amin’ny tombontsoa tadiavina, na iadiana, na arovana… Manao ny ataony hatrany ny mpanakorontana noho ny tombontsoa manokana? Anjaran’ny tena ny miaro tena, tsy ho voafandrika, mijoro, mandroso…